ibhanti ye-nickel yokuhlambela i-faucet 2
Ikhaya / Ukuhlamba igumbi lokuhlambela / Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela / WOWOW Igumbi lokuhlambela iSink Faucet iBrashi yeNickel ibanzi
WOWOW Bathroom Sink faucet Brunch Nickel Banzi
ikaliwe 4.94 Kwi-5 esekelwe kuyo 18 amanqaku umthengi
2321300 imiyalelo yokufaka
Igumbi lokuhlambela igumbi lokuhlambela ligcwele indawo ye-Nickel 2321300
Umatshini ohlaziyiweyo we-pop up lula ukusetela kunye nokusebenzisa kunombhobho oqhelekileyo.
Itekhnoloji yoyilo olukhawulezayo lobuchule bokuyila- ulwakhiwo lokuqala lwekhonkco olukhawulezayo kulula ukuyifaka ngokwakho ngaphandle kwemibhobho yamanzi! Gcina intlawulo yokufakwa kwemibhobho ngombhobho weenkuni!
Isibiyeli esinemingxuma emi-3 esine-intshi e-4-16-intshi yolwakhiwo oluxhaphakileyo-- yofakelo olulula.
Isiphulelo sempompo siphela isitayile se-nickel: 2 isiphatho sesikhuselo sesitayile se-nickel yokubeka isitayile yodidi. Ukuphulukana neminwe, ukuxhathisa ukuvela. Idesika ebambekile yamatyala amabi yamkelekile kwikhaya lokurenta, i-condominium entsha, i-single-floor, ikhaya leemoto, i-trailer yokuhamba, kunye nokusetyenziswa kwekhaya.
Umgangatho ophezulu we faucet nesiqinisekiso seminyaka emi-3: isisusa sokugcina amanzi sigcina ama-50% amanzi kunye ne-anti-splatter, esuswa ngqo neentende zakho ukuhlamba (akukho zixhobo zokwenza imfuno). I-cartridge ye-ceramic-ye-Drip ayiphumeleli.
I-SKU: 2321300 iindidi: Ukuhlamba igumbi lokuhlambela, Ukuphathwa kabini kwigumbi lokuhlambela lokuhlambela tags: isitya sokuxuba, imigodi emithathu yelaphu, Yonk 'indawo
12.1 x 8.6 x 3.1 intshi
3-umngxunya; itepu ebanzi
Umbhobho osasazwayo: 8-16 intshi
Isasazwe ngokubanzi ithumbu * 1, ufakelo iinkcukacha * 1, Vela drain * 1
Le itephu yokukhangela esemgangathweni. Iqhubeke ngokulula (sebenzisa imiyalelo) kwaye yeza neethumbu kunye nepop.up drain. Le pop up yokuqala endikhe ndanayo. Cinga ndiza kuyithanda. Mhlawumbi ayizukuqokelela iinwele ezininzi kwaye kufuneka icocwe. Kusezintsuku nje ezimbalwa ukuze bangabinakho ukuphawula ngobomi obude. Ndingaphinda ndiy-odole kwakhona.
Ipakishwe kakuhle kwaye iyacaca ngokucacileyo imiyalelo. Ifakwe kakuhle. Ixabiso elikhulu lombhobho osasazekileyo. Ndonwabile ngokuzama kwaye ngekhe ndithandabuze ukuphinda ndilungelelanise xa ndifuna enye. Irose yayiyibamba entle
Ukulula kokufakwa, kuthathe malunga nemizuzu eli-15 ukuya kwengama-20 ukuyifaka. Yinjineli ye-DIY kwaye ndineminyaka engama-70 ubudala ndithathe ixesha elide ukugoba phantsi kwento engento kwaye ndibuyele umva kunokufaka. Emva kokufakwa kuvavanyo kwaye akukho kuvuza kukhupha okanye ukondla. Uchukunyiswe kakhulu yimveliso. Ndenze igrisi yonke into yokulinganisa nangona ngenxa yento ethathe iintsuku ezimbini ukususa itepu endala ngenxa yalo lonke uqhagamshelo ebelubanda bekufuneka lisike itompu endala. Ixabiso lalikwinto yexabiso elinexabiso elifanelekileyo kumgangatho wemveliso. Kulula ukuyifaka ayifuni nemiyalelo ebonelelweyo.
Iipompo zihanjisiwe kwaye zafakwa namhlanje. Iimpompo ezimnandi, malunga nesiqingatha sexabiso leDelta okanye Ixabiso lePfister elilinganayo kwiivenkile ezinkulu zebhokisi. Andazi ukuba baya kulibamba njani ixesha elide kodwa banemvakalelo elungileyo kwaye ufakelo lwaluchanekile. Ukucoca idreyini yayiyinto entle kakhulu ngeli xabiso. Ukunciphisa inkwenkwezi enye kuba izikhonkwane ezibini ezisetyenziselwa ukuqina isibambo eshushu / esibandayo esivela ngaphantsi kwekhawuntari sasilahlekile. Ndayifaka ndisebenzisa kuphela i-nut ebandakanyiweyo kodwa izikrufu zibalulekile ekutshixeni isiphatho kwaye zazingekho kwipakethe.
Ayibizi mali ininzi, yenziwe e-China kwaye izikhombisi-ndlela azingqinelani ncam netephu kodwa… WOW !! Ndamangaliswa ngumgangatho wezinto kunye nokukhululeka kofakelo yayisisimanga esamkelweyo. Yatshintsha i-Pfister yeXabiso ebiza kakhulu engasebenziyo kwiminyaka embalwa. Ndithathe iiyure eziyi-5.5 ukufumana ukuba iPfister ikhutshwe ngenxa yenqanaba lomhlwa kunye nomhlwa- eneneni kuye kwafuneka ndizel isher washer ephezulu kumqheba wamanzi ashushu kwaye ndiyilahle ngaphezulu kwesinki ukuyikhupha. Ukufaka le faucet intsha yeWOWOW kundithathe ngaphantsi kweyure enye, akukho kuvuza, ukubukeka okumangalisayo! Yithenge! Nokuba ihlala kuphela unyaka okanye emibini (endiya kuyilindela ukuba ihlale ixesha elide nangamanzi anzima e-AZ), ngubani okhathalayo? Ngeli xabiso, thenga enye kwaye uyiphose kwangoko. Ndingayithenga kwakhona ngokuqinisekileyo!
Ndibe nokuthandabuza xa ndibeka iodolo. Zazikhangeleka zintle ngokwenene, kodwa ekubeni ndingumntu ongena brand ndandikulungele ukubabuyisa ukuba babengengomgangatho. Kodwa bajongeka behle ngaphandle kwebhokisi, bekulula ukuyifaka kwaye basebenze ngokugqibeleleyo! Ndiza kukwazisa ukuba ngaba olo tshintsho, kodwa ukuza kuthi ga ngoku andizisoli ngokuzithenga, kwaye ndathenga iiseti ezi-2 ngamampunge amabini!
Le mpompo ayisayi kufakelwa ezinye iiveki ezimbini xa kuqala ukulungiswa kwakhona. NANGONA kunjalo, ndinokuxelela ngokuqinisekileyo ukuba inkangeleko iyonke yale faucet ilungile kwaye iziqwenga ezintathu eziphambili beziqulathwe kwizikhongozeli zelaphu ezahlukileyo. Ndiqinisekile ukuba olu luphawu lomgangatho wale mveliso.
Inzima kunokuba bendilindele. Kubonakala kukuhle kwilize lethu elitsha. Ukufakwa ngokulula okulula, onke amalungu afunekayo eza nompompo. Kufunyenwe okufanayo kwivenkile yethu yasekhaya kodwa yayili-3times indleko yale. Ngaba uya kuthenga kwakhona
Ndihlaziye igumbi lam lokuhlambela ndinobutsha obuninzi. Le faucet yayiyeyona nto ndiyifunayo kodwa indlela yayixabisa kakhulu kwiivenkile ezinkulu zebhokisi. Ndiphantse ndazinza ngento endingayithandiyo de ndiyifumane le. Ngoku ndonwabile.
Ndingumnokontraka kwaye kufuneka nditsho ukuba le yimigangatho elungileyo yexabiso. Kulula ukuyifaka kwaye yenziwe kakuhle kwaye ipakishwe. Umbhobho ofanayo kwiivenkile ezinkulu zebhokisi uliphinda kabini ixabiso.
Ndikuthandile kwangoko ukubonakala kwale faucet. Kutshanje ndiye ndathenga amampunge amatsha kwaye oku kujongeka kukuhle. Ndiyacebisa kwaye ndonwabile ngemveliso.
Ezi mpompo bezizezona kanye izinto esizifunayo ukuze sihlaziye igumbi lethu lokuhlambela. Uyilo olulungileyo kunye nomgangatho ngexabiso elifanelekileyo kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo.
Kufakwe 2 kwigumbi lokuhlambela
Umbhobho wenza kakuhle kwaye i-instillation ilula kakhulu. Umyalelo owaneleyo awubonisanga ukuba izixhobo zesinyithi yimisonto yombhobho esemgangathweni. Kuya kuba lula kakhulu ukuyilungisa okanye ukuyibuyisela endaweni ngenxa yendlela itephu ekhuseleke ngayo iya kuba nakho ukususa ngesikrelemnqa kunye neminwe yakho. Uyilo olukhulu
Ndifakile malunga nomenzi ngamnye wepompu ebiza ama-3-4 ixesha leendleko zalo- linomgangatho ukuba ulungile okanye ulunge ngakumbi- kwaye kulula kwaye wonwabile ngokuthenga
Ixabiso elifanelekileyo. Inkangeleko ecocekileyo kakhulu kunye nemveliso ekumgangatho ophezulu. Utywini lwam lichukumisekile. Eyona nto intle ngayo kum kukucofa idreyini yokuthintela - akukho plunger yokuyaphula!
Le itephu entle kakhulu, kwaye ininzi into. Umbatyhi wandibuza ukuba ndiyifumene phi kuba ufuna ukuthenga.
Impompo emangalisayo kwaye isongelwe kwiingxowa zabo zelaphu ukuze zingakrwitshwi - kukho umntu ondifakeleyo kwaye wakufumanisa kulula kakhulu kwaye nemiyalelo icacile- ubuzile ukuba banazo na iipompo zeeshawari zokutshatisa kuba ndiza kuyalela Nye!
Iipompo bezikumgangatho olungileyo kwaye zibukeka zintle. Ukufaka kuhambe kakuhle kungekho ngxaki. Ekuphela kwento endinokuyithanda kukuba imigca yokuhambisa amanzi yomelele ngakumbi. Kuya kufuneka ulumke xa uqhagamshela imigca yamanzi.